Soosaarayaasha & Alaab-qeybiyeyaasha Mashiinka Calaamadda adag - Shiinaha Warshadda Mashiinka adag
Mashiinka goynta kartoonka
Waxaa badanaa loo isticmaalaa jarista iyo jarista kartoonada, sabuuradda, iwm. Waa qalab lagama maarmaan u ah dahaadhka buugaagta iyo sanaadiiqda hadiyadaha ee fasalka sare.
Cadaadis mashiinka xumbo khamri
168 senes cadaadis mashiinka xumbo khamri waa sida ay baahida macaamiisha waa horumarinta qalab cusub oo wax taaj oo kale sanduuqa hadiyad warqad, goobooyin hawo hawada dusha, laalaabashada, dhalanrog, iyo kartoon dahab iyo qalin, saamaynta koolo warqad gaar ah ma wanaagsana, dusha warqad naxaas ah xoqan iyo arrimo kale oo mashiinka dheellitiran ah.
Afarta dhinac mashiinka gees
Sanduuqa khamriga ee xirfadleyda ah, sanduuqa hadiyadaha, nooca sanduuqa shaaha, iyo taxane ah codsiyada baakadaha kartoonka cawlan.
Naqshadeynta makiinadani waa mid ugub ah, isafgarad leh, aamin ah, waarta oo sahlan in la ilaaliyo.
Mashiinka duubaya Frame 211 waa sida ay baahida suuqa waa horumarinta qalab cusub, dhululubada dhamaadka sare, wo Chuan PLC Taiwan wemview taabashada shaashadda gacanta visual, hagaajinta dhimaya.
Mashiinka calaamadeynta sanduuqa adag ee Semi-Automatic oo leh robot
Mashiinka loogu talagalay sanduuqa hadiyadaha, sanduuqa baakadaha, sanduuqyada gacanta lagu sameeyo ee wax soo saarka qalabka wax lagu soo saaro, la tuuri karo ayaa ogaanaya sameynta isku laaban, dhegta laaban, ka saarida goobooyin iyo wax isukeenida iyo laalaabida iyo sii wadida howlaha, waxay badbaadin kartaa waqti badan iyo macmal, si wax ku ool ah kor loogu qaado wax soo saarka waxsoosaarka ayaa soosaaraya badeecada la doorto ee soosaarida sanduuqa wax lagu duubo ee shirkadda.
Double madaxa mashiinka xumbo
Waxaa si fiican loogu dhejin karaa mashiinka sanduuqa guud ee otomaatiga ah iyo khadka isku dhafka semi-otomaatiga.
Suuqa warshadaha baakadaha maanta, si loo wanaajiyo tartanka sumadaha iyo soo bandhigida qalabka otomatiga ayaa noqdey isbeddel weyn oo ku saabsan horumarinta shirkadaha ka shaqeeya shirkadda baakadaha.
Mashiinka loogu talagalay sanduuqa hadiyadaha, sanduuqa baakadaha, sanaadiiqda gacmaha lagu sameeyo ee qalabka wax soo saarka, isku tuurista waxay ogaataa sameynta isku laabanta, dhegta laalaaban, ka saarida goobooyin iyo wax isukeenida iyo laalaabida iyo sii wadida howlaha, waxay badbaadin kartaa lol waqti iyo macmal ah, si wax ku ool ah kor loogu qaado wax soo saarka waxsoosaarka ayaa soosaaraya badeecada la doorto ee soosaarida sanduuqa wax lagu duubo ee shirkadda.
Mashiinka dhajinta dariiqa otomaatiga ah
Mashiinka waxaa badanaa loo isticmaalaa afar dhinac oo meelaynta geeska tooska ah. Waxaa badanaa lagu dabaqaa sanduuqyada mobilada, sanaadiiqda hadiyadaha, sanaadiiqda dahabka, sanaadiiqda dharka, sanaadiiqda kabaha, sanaadiiqda la isku qurxiyo iyo sanaadiiqda kale. Nidaamka adeegga buuxa iyo is-dhexgalka mashiinka aadanaha ayaa go'aamiya saxsanaanta, dhererka, rakibidda iyo howlgalka nashqadeynta aadanaha.
Mashiinka dhejinta otomaatiga ah
N-650A (850A) Mashiinka isku dhejiska ah ee wax lagu duugo ee 'Aulomatic feeder' oo leh shaqada waraaqda otomaatigga ah ee wax lagu dhejiyo iyo xajmiga, oo leh iskuxiraha heerkulka tooska ah iyo 24- saacadood limer
Mashiinka duubaya sanduuqa adag
238 taxane ah oo si toos ah saxaafadda xumbada xarkaha u leh waa shirkadeena horumarinteedii ugu horeysay iyo soo saarida sanduuqa cusub ee samaynta qalabka samaynta, jiilka labaad, ficilka mashiinka oo dhan iyo muuqaalka muuqaalka, nooca sanduuqa cabbirka ayaa lagu dabaqi karaa noocyo kala duwan.